Global Voices teny Malagasy » Holandy: Ao amin’ny Twitter i Sven Kramer, nahazo medaily volamena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Oktobra 2018 4:02 GMT 1	 · Mpanoratra Percy Balemans Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Holandy, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Ho an'ny Holandey, nanomboka tamin'ny fifaninanana tena lehibe ny Lalao Olaimpika Ririnina 2010 tany Vancouver: fikorisana an-dranomandry 5000 metatra haingam-pandeha. Nanantena ny firenena iray manontolo (sy ny hafa eo amin'ny tontolon'ny fikorisana andranomandry haingam-pandeha) fa ilay Holandey Sven Kramer  no hahazo ny volamena, saingy ny fanontaniana dia hoe: mety ho afaka hiatrika io tsindry goavana io ve i Kramer?
Nisioka taloha, nandritra sy taorian'ny fifaninanana ireo olo-malaza Holandey sy ny namana mpikorisa an-dranomandry (Olaimpika).
Natoky tena  ilay mpikorisa Holandey Erben Wennemars , naman'i Sven sady namana ao amin'ny ekipa:
Hahazo VOLAMENA isika androany!!
Ary nanome toky ny tsirairay izy fa vonona i Sven :
misakafo maraina fotsiny miaraka amin'i Sven, efa vonona izy.
Na ilay mpikorisa Amerikana Shani Davis , mpifanandrina amin'i Kramer amin'ity fifaninanana ity aza nanam-potoana nandefasana sioka :
Vao avy nahavita fanazaran-tena alohan'ny fifaninanana. Mahatsiaro faly aho … mientanentana tanteraka ny vahoaka … ho MAHAFINARITRA ity (na dia mandaka ahy aza i Sven).
Mpilalao sarimihetsika Holandey Antonie Kamerling  nizara ny fientanentanany momba ny fifaninanana, manome vaovao farany ho an'ny vahoaka. Alohan'ny fifaninanana, nisioka izy hoe :
henjana ny tsindry mahazo an'i Kramer, izy no heverina fa mahomby indrindra “favori” sy voalohany hifaninanana amin'ireo “favori” rehetra. Somary mitebiteby kely aho saingy soa ihany, fa tsy nisy nianjera nandritra ny 5k.
Nanontany izay tao an-tsain'i Sven izy:
Tiako hahita ny ao an-tsain'i Kramer, Fabris sy De Jong ianao. Ho tanteraka izany afaka taona vitsy.
Taorian'ny hazakazak'i Sven, nanoratra izy hoe :
Jesoa, tena nampientanentana izany,….toa nanao izay vitany izy.
Nanomboka avy eo ny fiandrasana. Voalohany, nifaninana tamin'ilay mpikorisa Holandey De Jong ilay mpikorisa Koreana, Lee :
Lelike, nihevitra aho fa handresy azy ity Koreana ity, adala, tsy azo izany.
Mety afaka handresy azy ve ilay Italiana Fabris :
Lelike, ho lasa adala aho, tsy…. ity Fabris ity no…???
Ary farany, sento :
eny, vitany izany!!!!!!!
Mpilalao sarimihetsika Holandey Halina Reijn  tsy maintsy nilalao tantara an-tsehatra nandritra ny hariva ary nifanerasera avy eo mba hiezaka hamantatra izay zava-niseho :
Iza no nandresy tamin'ny fikorisana an-dranomandry haingam-pandeha?
Ary nandefa fahitalavitra haingana  rehefa nahita fa mbola tsy tapitra ny fifaninanana:
Eny, miala tsiny noho ny fanontaniako adaladala……mijery fahitalavitra aho izao! Sven….
Vao avy tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina ao New York ilay mpanao gazety ara-panatanjahantena Holandey Wilfried de Jong  ary tsy maintsy niditra aterineto :
ato amin'ny efitrano fahatongavana, mihaino radio 1. Mihaino fatratra ny solosaiko ilay Holandey hafa.
Raha nahazo volamena ihany i Sven Kramer, marobe ireo fiderana. Erben Wennemars nanoratra hoe :
ety ambonin'ny volana aho noho i Sven Kramer…..arahabaina!
Ny mpifanandrina taminy, Shani Davis, nanoratra hoe :
Tena faly noho i Sven aho. Mbola ato anatiko ireo vahoaka … fahatsapana mientanentana tanteraka. Fotoana hanovana hafainganam-pandeha, vonona amin'ny hazakazaka haingana.
Mpikorisa Amerikana Chad Hedrick , izay tsy nahomby niaro ny voninahiny Olaimpika tamin'ny 5k tamin'ny fifaninanana farany, nanoratra hoe :
Arahabaina i Sven- fifaninanana mahafinaritra! Tena mendrika ianao!
Mpikorisa Holandey sy ny ekipa namany Mark Tuitert , izay handray anjara amin'ny 1000 et 1500 metatra lehilahy, nanoratra hoe :
Manaja an'i Sven, vitany izany ary zavatra tsy azonao heverina fa efa lasanao mialoha izany.
Ekipa namana Ronald Mulder  [nl], izay handray anjara amin'ny 500 metatra lehilahy nanoratra hoe :
Nijery ny fifaninanana lehibe 5k! Nahazo ny volamenany mendrika azy niaraka tamin'ireo vahoaka Holandey 16 tapitrisa manohana azy i Sven! Manaja.
Ekipa namana Annette Gerritsen  [nl], izay handray anjara amin'ny 500, 1000 sy 1500 metatra vehivavy nanoratra hoe :
Andro voalohany mahafinaritra. Zava-bita tsy mampino nataon'i Sven.
Mpanazatra Holandey Ingrid Paul  [nl] izay mpanazatra ny ekipa mpikorisa Kanadiana ankehitriny, nanipika  fa tena tsy mampino ny zava-bitan'i Sven:
Vao avy nilaza aho hoe mendrika handresy izy, saingy mihoatra noho ny fahamendrehana, ilay favori lehibe ary nanao ady mahafinaritra sy fifaninanana mahafinaritra izy, nanao izay vitany izy! Sven Lehibe.
Mpikorisa Norveziana Øystein Grødum  nahafantatra ireo Holandey niarahaba an'i Sven  ary naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'ny namana mpiray tanindrazana Håvard Bøkko laharana faha-4:
Arahabaina i SVEN….. VOLAMENA…..miala tsiny tamin'ny laharana faha-4 @havardbokko 
Mbola tsy hita tao amin'ny Twitter i Sven Kramer. Tsara kokoa izy raha mifantoka amin'ny fikorisana haingam-pandeha, satria mbola manam-bintana hahazo medaily vitsivitsy.
Sary sy hajiatsary nalaina tao amin'ny tranonkalan'i Sven Kramer 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/20/128042/
 Sven Kramer: http://www.svenkramer.nl/
 Natoky tena: http://twitter.com/erbenwennemars/status/9058924053
 Erben Wennemars: http://en.wikipedia.org/wiki/Erben_Wennemars
 vonona i Sven: http://twitter.com/erbenwennemars/status/9062686946
 Shani Davis: http://www.shanidavis.org/
 nandefasana sioka: http://twitter.com/ShaniDavis2010/status/9069070989
 Antonie Kamerling: http://www.antoniekamerling.nl/
 nisioka izy hoe: http://twitter.com/AntonieKamerlin/status/9068793392
 Sven : http://twitter.com/AntonieKamerlin/status/9070261382
 nanoratra izy hoe: http://twitter.com/AntonieKamerlin/status/9071739333
 nifaninana tamin'ilay mpikorisa Holandey De Jong ilay mpikorisa Koreana, Lee: http://twitter.com/AntonieKamerlin/status/9072016616
 Mety afaka handresy azy ve ilay Italiana Fabris: http://twitter.com/AntonieKamerlin/status/9072078483
 Halina Reijn: http://www.halinareijn.nl/
 hamantatra izay zava-niseho: http://twitter.com/halinareijn/status/9070300784
 nandefa fahitalavitra haingana: http://twitter.com/halinareijn/status/9071645578
 Wilfried de Jong: http://www.wilfrieddejong.nl/
 niditra aterineto: http://twitter.com/wilfrieddejong/status/9072078531
 nanoratra hoe: http://twitter.com/erbenwennemars/status/9073707548
 nanoratra hoe: http://twitter.com/ShaniDavis2010/status/9073770102
 Chad Hedrick: http://www.chadhedrick.com/
 nanoratra hoe: http://twitter.com/chadhedrick/status/9078619186
 Mark Tuitert: http://marktuitert.nl/
 nanoratra hoe: http://twitter.com/marktuitert/status/9072610999
 Ronald Mulder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Mulder
 nanoratra hoe: http://twitter.com/mulderronald/status/9078189678
 Annette Gerritsen: http://www.annettegerritsen.nl/
 nanoratra hoe: http://twitter.com/AnnetteGerrit/status/9085575400
 Ingrid Paul: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Paul
 Øystein Grødum: http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Gr%C3%B8dum
 niarahaba an'i Sven: http://twitter.com/oysteingrodum/status/9073477088
 tranonkalan'i Sven Kramer: http://www.svenkramer.nl/ target=